Umvelisi kunye nomthengisi weplastikhi yeplastikhi ICopak
Isaladi yesikhongozeli / isitya esilahlwayo sesaladi / iplastiki yesaladi yokupakisha / Isikhongozeli sesaladi yeplastiki,
I-12Oz / 360ml
Ngokweekhonteyina zethu zesaladi zeplastikhi, umthamo we-12oz, 16oz, 24oz, 32oz zezona ndawo zithengwayo zithandwayo. Iinkcukacha zinjengaleyo idweliswe apha ngasentla. Izinto eziphathekayo ze-PET zi-100% zinokuphinda zisetyenziswe.
Ngaphandle kweplastikhi yesaladi yeplastikhi yenziwa, sinokukunceda ukufumana izitya zesaladi zezinye izinto ezinje ngephepha, i-PP njalo njalo. Kodwa isikhongozeli sePET sesaladi senziwe ngeplastiki yendalo ezinzileyo ukuze sinike obunye ubomi ngokwenza ntsha kwakhona. Isimahla ipetroleum kwaye ayiqulathanga izinto ezinobungozi ezinokuchaphazela umxholo.
I-1, ihlala ixesha elide kwaye icacile isitya sesaladi yeplastiki: Esi sikhongozeli sokuthatha siqinile kwaye siyamelana nokuqhekeka kunye nekhefu. Ukuhamba ixesha elide akukho ngxaki.
2.Ideal yokugcina izinto zokutya ezinjengepasta, iisaladi, inyama yenyama, ukutya kwaselwandle, njl. Isikhongozeli sokutya seCOPAK esicacileyo singabonisa ukutya kwakho ngokubonakala okuphezulu, kwaye oku kutsala abathengi ngakumbi kuwe.
Isikhongozeli sesaladi seplastikhi se-3.COPAK silungele ukukhonzwa ngokulula kwaye siza nesiciko esitywina isitya ngokufanelekileyo.Iziciko zenza isitywina esiqinileyo sokulondolozwa kwemifuno engcono.Akukho kuvuza. Yenziwe ngeplastiki enokuphinda isetyenziswe kwaye inesiciko esivulekileyo esikhuthaza ukubonakala kwemveliso kunye nentengiso.
YIDLA IMPILO YONKE INDAWO-Lungisa isaladi yakho oyithandayo kwezona freshi zintsha ngokulula kwikhaya lakho kwaye wonwabe eofisini okanye ekuhambeni.
5.AYICOLELANGA! - Yilahle nje wakugqiba; Akukho sidingo sokuhlamba kwaye uphathe ubuye usiya ekhaya, kodwa i-Eco inobuhlobo kwaye inokuphinda isetyenziswe kwakhona.
Egqithileyo Izikhongozeli zokuhanjiswa kwePET
Okulandelayo: Indebe yePET Portion
Iikomityi zePlastiki eziPrintiweyo ziSiko
12oz eziprintiweyo PET Plastic eyo- 92mm
Indebe yePET ecacileyo
Umenzi weNdebe yePET